တစ်ယောက်သောသူအတွက် စာလေးရေးသားဖော်ပြလာတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး – Cele Snap
အကယ်ဒမီမင်းသမီးချော ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ အနုပညာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ အောင်မြင်မှုတစ်နေရာကို အရယူထားနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမက တစ်ချိန်ကကြောငြာဘုရင်မလို့တောင်တင်စားရတဲ့ အထိအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးကြီးထက်ထက်မိုးဦးကတော့
ကိုဗစ်ကာလမှာတန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုlive လွှင့်ပြီးရောင်းချရာမှာစံချိန်တင်ရောင်းချနိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ထက်ထက်ကတော့ အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာလူထုလှုပ်ရှားမှုမှာမပါဝင်ခဲ့ဘဲအချိန်အတော်ကြာပျောက်နေခဲ့ တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
မကြာခဏဆိုသလို ထက်ထက်က တောရွာလေးမှာ တရားအားထုတ်ရင်းဥပုတ်စောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ ပုံလေးတွေကိုလည်း တင်ပေးလာပါသေးတယ်နော်.. .. .ထက်ထက်ကတော့ ခုချိန်မှာတော့ကိုယ်ပိုင်ရတနာဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ ကိုရောင်းချ
ဖို့ပြင်ဆင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. ဒီနေ့လေးမှာတော့ ထက်ထက်က Instagram မှာ ” မင်းဖို့ မင်းဖို့ ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ ပရိသတ်ကြီးကို စိတ်ဝင်စားအောင် လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်နော်.
ထက်ထက်ရေးသားလာတဲ့ စာလေးကတော့ ဘာအဓိပ္ပါယ်နဲ့ ဘယ်သူ့အတွက်များရည်ညွန်းထားလဲဆိုတာထက်ထက်ကို ချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ခန့်မှန်းပေးကြပါအုံးနော်…
SourcE; Htet Htet Moe Oo
အကယျဒမီမငျးသမီးခြော ထကျထကျမိုးဦးကတော့ အနုပညာလမျးကွောငျးတဈလြှောကျမှာ အောငျမွငျမှုတဈနရောကို အရယူထားနိုငျခဲ့သူ ဖွဈပါတယျ။ သူမက တဈခြိနျကကွောငွာဘုရငျမလို့တောငျတငျစားရတဲ့ အထိအောငျမွငျခဲ့တဲ့ မငျးသမီးကွီးထကျထကျမိုးဦးကတော့
ကိုဗဈကာလမှာတနျဖိုးကွီးပစ်စညျးတှကေိုlive လှငျ့ပွီးရောငျးခရြာမှာစံခြိနျတငျရောငျးခနြိုငျခဲ့သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ထကျထကျကတော့ အာဏာသိမျးပွီးနောကျပိုငျးမှာလူထုလှုပျရှားမှုမှာမပါဝငျခဲ့ဘဲအခြိနျအတျောကွာပြောကျနခေဲ့ တာဘဲဖွဈပါတယျ။
မကွာခဏဆိုသလို ထကျထကျက တောရှာလေးမှာ တရားအားထုတျရငျးဥပုတျစောငျ့နတေယျဆိုတဲ့ ပုံလေးတှကေိုလညျး တငျပေးလာပါသေးတယျနျော.. .. .ထကျထကျကတော့ ခုခြိနျမှာတော့ကိုယျပိုငျရတနာဆိုငျဖှငျ့ပွီးတော့ ကိုရောငျးခြ
ဖို့ပွငျဆငျနတော ဖွဈပါတယျနျော.. ဒီနလေ့ေးမှာတော့ ထကျထကျက Instagram မှာ ” မငျးဖို့ မငျးဖို့ ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ ပရိသတျကွီးကို စိတျဝငျစားအောငျ လုပျခဲ့ပါသေးတယျနျော.
ထကျထကျရေးသားလာတဲ့ စာလေးကတော့ ဘာအဓိပ်ပါယျနဲ့ ဘယျသူ့အတှကျမြားရညျညှနျးထားလဲဆိုတာထကျထကျကို ခဈြကွတဲ့ ပရိသတျကွီးလညျး ခနျ့မှနျးပေးကွပါအုံးနျော…
သူမရဲ့မွေးနေ့မတိုင်ခင်မှာ မြေဧကများစွာကျယ်ဝန်းတဲ့ခြံကြီးတစ်ခြံကို မွေးနေ့လက်ဆောင်ရလိုက်တဲ့ မျိုးစန္ဒီကျော်